Squadhelp ဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးအမည်ကိုကူညီပါ Martech Zone
အမှတ်တံဆိပ်ထိတ်လန့်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုကြားချင်ပါသလား။ သင်၏ကုမ္ပဏီက၎င်းကိုစတင်ရန်စီစဉ်ပြီးဒိုမိန်း၊ နာမည်နှင့်ပစ်လွှတ်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ FBI သည်လူသိရှင်ကြားနာမည်တူသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုရှိကြောင်းသင်သိသောအခါ၎င်းအားလုံးပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။ 3VE.
[လက်ရှိအမည်မရှိသောအေဂျင်စီ] သည်ထိုကိစ္စမျိုးကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမည်နဲ့မလုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယမထားသည့်ကုမ္ပဏီများစွာအတွက်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အေဂျင်စီများနှင့်ငွေအမြောက်အမြားသုံးစွဲခဲ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့၏အမည်သည်နိုင်ငံတကာတွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေအဓိပ္ပာယ်တူအဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ငါနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအကူအညီအတွက်ငါ့ကိုငှားခဲ့တယ်။ ငါချက်ချင်းပြproblemနာကသူတို့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိရှိပြီးသားအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်လူများသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှာမတွေ့နိုင်ကြောင်းချက်ချင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သူတို့၏စီးပွားရေးနာမည်ကိုရိုက်ထည့်သည့်တိုင်ပင်။
ငါကူညီခဲ့တဲ့နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသူတို့နာမည်ကမသင့်တော်သောဆိုဒ်နှင့်အလွန်နီးစပ်သည်ကိုရှာရန်ဂူဂဲလ်ကိုရိုးရိုးလေးရှာဖွေနိုင်သည်။ သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည် URL မှားယွင်းစွာရိုက်ထည့်ခြင်းကြောင့်မပျော်နိုင်သောအလားအလာအသစ်များကိုသူတို့ယူဆောင်လာဆဲဖြစ်သည်။
တပ်မှူး သင်၏စီးပွားရေးနာမည်ကိုရရန်၊ ရနိုင်သောဒိုမိန်းအမည်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏လိုဂိုကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ကူညီရန်ပင်လျှင်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးအမည်ကိုအဆင့် ၈ ဆင့်ဖြင့်ဆွဲယူသောအလွန်ကြီးစွာသော ebook တစ်ခုကိုသူတို့ရေးသားခဲ့သည်။
မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးမယ့်ပရိသတ်ကိုဘယ်သူတွေလဲ။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားချက်ကားအဘယ်နည်း။ မင်းရဲ့စရိုက်ကဘာလဲ။
နာမည်ကောင်းတစ်ခုရရန်အခြားဖန်တီးမှုများ (သူတို့၏အလုပ်) မှအကူအညီရယူပါ။
eBook ကို download လုပ်ပါ
တပ်မှူး သင်ထူးခြားသောစီးပွားရေးအမည်များနှင့်အတူတက်လာကူညီရန်တီထွင်ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်:
သင့်ပြိုင်ပွဲကိုစတင်ပါ - အလျင်အမြန်လွယ်ကူသောစီမံကိန်းအကျဉ်းပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအား Creative 70,000 ကျော်ဖြင့်မျှဝေမည်။
စတင်ထည့်သွင်းထားသောအကြံဥာဏ်များ - သင့်အနေဖြင့်နာမည်အကြံဥာဏ်များကိုစတင်ရလိမ့်မည် - သင့်အတွက်အထူးဖန်တီးထားသော - မိနစ်ပိုင်းအတွင်း။ ပြိုင်ပွဲဝင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသည်သင့်အတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်သည်။ ပုံမှန်အမည်ပြိုင်ပွဲတွင်နာမည်ပေါင်းရာနှင့်ချီသောအတွေးအခေါ်များကိုရရှိသည်။ အိုင်ဒီယာအားလုံးသည် URL ရရှိနိုင်မှုအတွက်အလိုအလျောက်စစ်ဆေးသည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း - သင်၏ပြိုင်ပွဲဒိုင်ခွက်မှသင်၏တင်ပြချက်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပါ။ entries တွေကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ သီးသန့်မှတ်ချက်တွေချန်ထားပါ၊ public message ပို့ပေးပါ။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့နာမည်ဆီသို့ ဦး တည်လိုက်ပါ။
အတည်ပြုပါ - သင်၏အမည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ဒိုမိန်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊
သင့်ရဲ့ဆုရှင်ကိုရွေးချယ်! - သင်၏ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးပါကဆုရရှိသူကိုကြေငြာပြီးအမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။ သင်၏နာမည်အတွက် Logo Design သို့မဟုတ် Tagline စီမံကိန်းကိုစတင်ရန်သင်သည် Squadhelp သို့ပင်ပြန်သွားနိုင်သည်။
ထုတ်ဖော်: ငါတို့သုံးပြီးတာပါ တွဲဖက်လင့်ခ်များ ဒီ post အတွက် Squadhelp သည်။